मागुरमाडी सिमसार क्षेत्र पर्यटकका लागि खुला « Loktantrapost
२० पुष २०७८, मंगलवार १९:५६
मेचीनगर, २० पुस । मागुरमाडी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह विट नं. १ को २६ औं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार सम्पन्न भएको छ ।
साथै, सोही अवसरमा पर्यटकीय सिमसार क्षेत्रको उद्घाटन समेत गरिएको छ । उद्घाटनसँगै वन समूहको सिमसार क्षेत्र पर्यटकका लागि खुला भएको छ । साधारण सभा तथा पर्यटकीय सिमसार क्षेत्रको उद्घाटन मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले गरेका हुन् ।
समूहका अध्यक्ष लिम्बूको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभामा नगर प्रमुख आचार्यले वन समूह र नगरपालिकाबीचको समन्वयमा वन विकास गर्न सकिने बताए । उनले मेचीनगर क्षेत्रभित्र रहेका वनहरुको गतिविधिलाई समेटेर नगरपालिकाले पुस्तक सार्वजनिक गर्न लागेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मेचीनगरकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, जिल्ला वन उपभोक्ता महासंघ झापा अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारी, मेची सव डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजन राई, मेचीनगर वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष गोपाल खड्का, वडा सदस्य इन्द्र प्रधान, खुट्टीडाँगी सामुदायिक वनका अध्यक्ष टंकबहादुर नेपाल लगायतले बोलेका थिए ।
वन समूहका उपाध्यक्ष जोखेन मेचेले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव कमला गौतमले गरेकी थिइन् । वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा उपभोक्तालाई सिमसार क्षेत्रमा पिकनिकको आयोजना गरिएको थियो ।